Ileghachi Anya na Ezumike idayzụ na 2013, na Ihe Keep Ga-eburu n’uche n’afọ 2014 | Martech Zone
Tupu ịtọọ usoro mmefu ego ahia gị na okike afọ a, gbaa mbọ hụ n’ịlaghachi azụ n’ihe anyị mụtara site n’afọ gara aga. Ghọta ụfọdụ data dị mfe site na oge ịzụ ahịa nke 2013 nwere ike inye aka kọwaa ụzọ gị na ndị gị na ha na-emekọrịta ihe si zụọ ahịa. Chọta ihe nyeere ma merụọ ahụmịhe ịzụ ahịa nke ndị ahịa n'oge ezumike 2013, Ntụaka nyochara ndị ahịa 1,000 ma chịkọta data na infographic dị n'okpuru.
N'ihe banyere ndị na-azụ ahịa, 48% nke ndị ahịa kwuru na ọkwa na nyocha bụ ihe mere ha ji gaa na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, na-esote nkwalite email na 35% na nsonaazụ ọchụchọ google nke gụnyere foto ngwaahịa na 31%. Pasent iri asaa na ise nke ndị ahụ nyochara nyochara nyocha na nyocha ugboro abụọ ma ọ bụ karịa tupu ha agaa ụlọ ahịa. Ọ bụ ezie na ụmụ nwanyị bụ 145% nwere ike ibute nkwalite email na ekwentị ha maka ịzụ ahịa ụlọ ahịa, ụmụ nwoke 20% nwere ike ịchọ ọnụahịa ka mma ebe ọzọ tupu ha azụta ihe n'ụlọ ahịa. Na 2013, ojiji nke ngwa ahịa ejiri ngwa ahịa rịa elu 48%, ụlọ ahịa ndị na-ebugharị ahụmịhe ahịa dijitalụ na-agbanwe agbanwe ma na-arụ ọrụ nke ọma na-enweta ọtụtụ ahịa.
Omume nke akụkọ? Mgbe ịrere ndị ahịa ngwaahịa, ọ dị mkpa iburu dijitalụ n'uche, ọkachasị agagharị. Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-eme nyocha ha ma na-achọ ụzọ ha ga-esi nweta azụmahịa (ndumodu ndumodu: email ahịa., na omume a ga-anọgide na-eto eto na accessibility mobile ngwaọrụ nwee ike na-enye. Yabụ, nyochaa ma bulite nyocha gị, gụnyere visuals, jiri email ma bulie ngwa ahụ iji jide n'aka na ị kwadoro maka afọ 2014 na-aga nke ọma.
Tags: onye ahịadataecommerceemail MarketinginfographicmarketingMobile na Mbadamba ụrọretail